Umculi wegqom' uqambe ingoma encoma umfundisi osolwa ngokuba wumbombayi
UMOONCHILD Sanelly ukhiphe umucwi enkampaniniya phesheya kwezilwandle Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | June 27, 2020
UMCULI wakuleli wegqom', uMoonchild Sanelly, uthulele isigqoko umfundisi waseMalawi kodwa osedume kakhulu kuleli, uShepherd Bushiri ngengoma.
UBushiri ngomunye wabafundisi bangaphandle abafike basusa umsindo kuleli futhi esolwa ngokuthuthela eMalawi umnotho awenza ngomnikelo awuqoqa emakholweni akuleli.
Lo mucwi osihloko sithi Bushiri, uMoonchild uwukhiphe ngaphansi kwenkampani entsha yaphesheya esanda kumsayina iTransgressive Records kodwa ibambisene neGallo Records. ITransgressive Records inkampani ezinze e-England ebophele abaculi abaningi okubalwa kubo u-Arlo Parks, Marika Hackman, Let's Eat Grandma noSonghoy Blues.
UMoonchild uyena kuphela umculi wakuleli osayinwe yile nkampani. Ekhuluma nomsakazi weMetro FM, uMo Flava, uMoonchild uthe lesi sivumelwano sizomsiza kakhulu ukusabalalisa umculo wakhe nokukhulisa igama lakhe emhlabeni jikelele.
"Seyikhona ne-video engiyenzele le ngoma futhi iyatholakala nasezitolo ezikuma-digital platforms."
Isolezwe liyizwile le ngoma futhi layibona ne-video, uMoonchild ukhuluma ngomuntu wesifazane obehlushwa yindoda kodwa wayithatha wayiyisa kuBushiri maqede sebeyakholwa nayo futhi sebethandaza ndawonye.